Tuesday, 13 Feb, 2018 11:06 AM
भैरहवा, १ फागुन - रुपन्देहीका किसान अहिले कृषि बीमामा आकर्षित हुँदै गएका छन् । सरकारले कृषि बीमालाई प्राथमिकतामा राखेपछि किसान आकर्षित भएका हुन् । गहुँ, माछा, आलु, केरा, तरकारी, चैते धानलगायतका खाद्यान्न तथा तरकारीमा किसानले बीमा गर्ने सुविधा पाएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, रुपन्देहीले जनाएको छ ।
किसानले गर्ने विमित रकममध्ये ७५ प्रतिशत राज्यले अनुदान दिने र २५ प्रतिशत किसानले तिर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा विभिन्न खाद्यान्न बालीमा जिल्लाका २२० जना किसानले तीन करोड पाँच लाख बराबरको कृषि बीमा गरेका छन् ।
रुपन्देही खाद्यान्न र तरकारीमा आत्मनिर्भर भएको जिल्लासमेत रहेको जानकारी दिँदै कृषि विकास कार्यालय रुपन्देहीले जिल्लामा एक लाख ८२ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक रहेको र दुई लाख ७६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको जिल्ला कृषि कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख भोजराज सापकोटाले बताउनुभयो ।
गेडागुडी र तेलहनबालीको उत्पादनले भने रुपन्देहीलाई अपुग हुने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रुपन्देहीका कृषि प्रसार अधिकृत आशा भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
कृषि प्रसार अधिकृत भण्डारीले जिल्लामा कृषि पकेट क्षेत्र ब्लक क्षेत्रको आधारमा कार्यक्रम अगाडि बढाइएको जानाकारी दिँदै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत किसानलाई आर्थिक अनुदानसमेत उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो ।
प्रत्येक पकेट क्षेत्रका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रुपन्देहीले रु. दुई लाख ८२ हजारको अनुदान दिने गरेको छ भने जिल्लामा रहेका दुई ब्लक क्षेत्रमध्ये माछा ब्लक क्षेत्रलाई रु ४३ लाख र खाद्यान्न उत्पादन हुने ब्लक क्षेत्रलाई रु. ५३ लाख अनुदान सहयोग गरेका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।